Court blocks Kampala Central vote recount application - PML Daily
Court blocks Kampala Central vote recount application
KAMPALA — Chief Magistrate Esther Nsambu has dismissed with costs an application for vote recount for Kampala Central constituency filed by Fred Nyanzi Ssentamu of National Unity Platform challenging the win of incumbent Muhammad Nsereko.
In her ruling delivered Thursday afternoon, the Mengo Chief Magistrate, Nansambu said Nyanzi ran to court on hearsay, without any evidence warranting a vote recount.
She also said her court lacks jurisdiction on the prayers made by Nyanzi in his vote recount application before dismissing it with costs.
Nyanzi ran to court after losing to the incumbent Kampala Central Member of Parliament, Muhammad Nsereko who garnered 16,998 votes against Nyanzi’s 15,975.
In his petition, Nyanzi claimed that the voting process and counting were marred by malpractices and irregularities committed by both the Electoral Commission officials and Nsereko’s agents.
He also accused some presiding officers of denying his agents access to voting areas.